Kolombiana ‘Tiger’ Radamel Falcao, Voatendry Anisan’ny Ballon d’Or FIFA · Global Voices teny Malagasy
Kolombiana ‘Tiger’ Radamel Falcao, Voatendry Anisan'ny Ballon d'Or FIFA
Nandika (en) i Ana Isabel Martinez
Voadika ny 05 Novambra 2012 1:42 GMT
Namoaka fanentanana fampahafantarana ilay mpanafika Kolombiana Radamel Falcao mifaninana ho lasa Ballon d'Or FIFA 2012 ny klioba baolina kitra Espaniola Atlético de Madrid
Mitondra ny lohateny hoe “Falcao: Liona Volamena” ny ao amin'ny fanentanana, izay ahitana sary manodidina ny Kianja Vicente Calderón, ary nosoloina sarinà lohanà liona ireo takelaby (panneau de signalization) tamin’izany..
Ahitana mozika misy ilay hira malaza “Eye of the tiger” (mason’ilay liona) hiran’i Survivor ny lahatsary. Survivor, fantatra toy ilay sarimihetsika “Rocky III”. Notontosain’i Chiara Mastroianni ny fandraketana ilay hira ao amin’ny lahatsary.
Toy izao ny fiafaran'ny lahatsary: “Tongasoa aty Calderón: Fonenan'ny Liona”.
Tafita teny amin’ny Kolombiana ilay fanentanana, izay nizara [es] ny lahatsary ary naneho hevitra tao amin’ny Twitter tamin’ny alalan’ny tenifototra #UnTigreDeOro [es] (Liona volamena). Na dia maro be aza ireo olona nampiseho fientanam-po [es] tamin’izany, ny sasany kosa naneho ny ahiahiny [es] mikasika ny mety ahazoan’ilay Kolombiana izany voninahitra izany mitaha amin’ireo mpilalao baolina kitra tahaka an’i Lionel Messi sy Cristiano Ronaldo, ohatra.
Tomás Chalela (@Tomastxa) [es] mitaraina ny amin’ny hoe Falcao hifanandrina amin’i Messi, izay fantany tsara fa mpilalao baolina kitra mahay indrindra:
@Tomastxa: Mahay ny Falcao, saingy tsy ampy izany raha te ho lasa “Baolina Volamena”. “Ratsy vintana” izy raha milalao ao anatin'ny vanim-potoana ilalaovan'i Messi, izay tsara lavitra mihoatra noho ny rehetra.
Sebastián Bermeo (@SebastianBermeo) [es] nanohana an’i Falcao ary nilaza fa afa-po:
@SebastianBermeo: #QueLoSepaElMundo (Aoka ho fantatr’izao tontolo izao) reharehan’ny firenena i Falcao, ary amiko, tokony hahazo ny Baolina Volamena izy.
Etsy andaniny, maro ireo mpiserasera no niresaka [es] tao amin’ny Twitter mikasika ny fanambaran’ilay mpilalao baolina kitra taloha, Faustino Asprilla [es]: “sarotra ho an’i Falcao ny handrombaka ny Baolina Volamena raha any Atlético de Madrid”.
Amin’ireo Kolombiana maro be, miha-mitombo ny fanohanana an’i Falcao [es].
Nandritra izany, naneho ny fankasitrahany tao amin’ny amin’ny kaonty Twitter-ny ofisialy i Radamel Falcao (@FALCAO) [es]:
@FALCAO: “@Atleti: LAHATSARY. @Falcao mety hahazo ny Baolina Volamena. Tandremo, #UnTigreDeOro tsy tana ao Calderón: http://ow.ly/eMIBZ ;)” Misaotra!!!